LEAVITT BULLDOG DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Leavitt Bulldog Dog Macluumaadka iyo Sawirada
Mojo Leavitt Bulldog da'da 4 sano
Leavitt Bulldog waa eeyo muruqyo ah, dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo leh xoog weyn, xasilooni iyo isboorti. Isagu waa isku dheelitiran yahay oo waa la isku dheellitiran yahay, oo aan lahayn astaamo buunbuunin ama taagan. Wuxuu leeyahay muuqaal eey karti u leh inuu guto shaqadiisa asalka ah, dibida oo loo xiro. Madaxa OEB waa mid caan ah oo riwaayado ah. Wareegga madaxa ayaa ugu yaraan la mid ah dhererka eeyga ee engegga. Dhabannadu way ballaaran yihiin, si fiicanna waa loo horumariyay waxayna muujiyaan muruqyada daanka oo xoog badan. Foodda waxoogaa duuduubani waa la aqbali karaa. Qalfoofku waa weyn yahay laakiin si fiican ayaa loogu dheelitiraa jirka muruqyada eeyga iyo garbaha caanka ah. Waxaa jira kala-bax laga bilaabo joogsiga illaa occiput-ka. Waxay leedahay qalfoof cidhiidhi ah iyo fool fool. Afku waa laba jibbaaran, ballaadhan yahay oo qoto dheer, oo leh dib u dhac sugan. Fogaanta laga bilaabo caarada sanka ilaa halka la istaago ma dhaafayso saddex meelood meel meel masaafada u jirta caarada sanka ilaa occiput. Dhererka muuska geeska ilaa garka sare ee masarka wuxuu la eg yahay ama ka weyn yahay dhererka masarka, sidaas awgeedna wuxuu soo saarayaa muuska, muuska laba jibbaaran. Duuduubku wuxuu leeyahay laalaab yar oo dhexdhexaad ah. Diyaaraduhu waa nus-qalin. Qaniinyadu waa shaashad hoose oo toosan ayaa toosan. Qaniinyada hoose waa ¾ ”ama ka yar. Laf-dhabarka hoose ayaa si dhexdhexaad ah u qalooca xagga hore iyo xagga dambe. Indhuhu way wareegsan yihiin si ay u egyihiin yicib iyo dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Iyaga ayaa si ballaaran loo kala saaray, iyadoo geeska dibedda ee isha ay ku soo xirmayso xarigga dibedda ee qalfoofka oo hoos loo dhigay, heerka muuska, halkaasoo joogsiga iyo muuska ay iskula xiriiraan. Midabka indhaha waa bunni, oo leh cirifka indhaha midab madow. Ilkaha canine waa weyn yihiin. Ilko jaban, jajabay ama la soo saaray ayaa la aqbali karaa. Waxaa jira 6 ilkood oo isku xigta hadhuudh oo udhaxeeya geesaha Dulalka sanka way ballaadhan yihiin oo xarriiq toosan ayaa u dhexeysa dulalka sanka min caaradda sanka ilaa salka hoose ee bushimaha sare. Sanka waa mid weyn oo balaaran oo xiriir la leh balaca xuubka. Midabka sanku waa madow. Dhegaha ayaa kor u kacay, badhan ama tulip, oo leh doorbido ubax. Iyaga waa la sarreeyaa iyo xagga dambe ee dhakada. Dhegaha ayaa la dhigaa sida ugu ballaaran ee ugu macquulsan xagga sare ee madaxa. Cabbirkoodu waa yaryahay ilaa dhexdhexaad. Qoorta waa dherer dhexdhexaad ah, ballaadhan, oo xoogaa qaloocsan. Way ka yar yartahay madaxa meesha ay labadoodu ku kulmaan, wuuna ka sii ballaadhiyaa bartaas ilaa garbaha. Way inyar ka dabacsan tahay daanka ilaa xabadka, samaysana laba dhejis. Way ballaaran yihiin, aadna u muruqsan yihiin waxayna leeyihiin kala-goysyada garbaha garbaha. Qalfoofka (garabka garabka) waa inuu ahaadaa xagal qiyaas ah 35-darajo oo toosan una sameeya xagal qiyaastii 110 darajo ah humerus (dhudhun). Scapula iyo humerus waa inay u dhigmaan dherer ahaan qiyaas ahaan. Khad toosan oo laga soo qaaday barta scapula (sare) ilaa dhulka ayaa si toos ah ugu mari doona xusulka. Xusullada lama rogrogo ama dib looma dhigo. Lugaha si ballaaran ayaa loo kala saaray, iyagoo si toos ah uga soo dhacaya garbaha. Waxay si toosan ugu taagan yihiin lugaha gudihiisa oo ay si fiican u muruqsan yihiin, iyagoo siinaya muuqaal jilicsan oo dhinacyada hore ah. Afka hore waxay leeyihiin lafo dhexdhexaad ah waxayna u dhigmaan jirka. Taabashooyinku waa dherer dhexdhexaad ah. Way toosan yihiin, xoogan yihiin, dabacsan yihiin oo ku dhow yihiin dhinaca dhulka. Jidhku waa adag yahay oo awood badan yahay. Dhererka min caarada lafta ilaa bowdada dambe ayaa waxyar ka dheer dhererka dhulka ilaa qallajinta. Dhabarka ayaa ballaaran oo murqo leh, oo muujinaya awood. Topline waxay leedahay roach yar (ama giraangir) gadaal. Waxaa jira hoos u dhac xagga dambe ah, oo ah booskiisa hoose ee garbaha gadaashiisa. Laga bilaabo halkan lafdhabarta ayaa kor ugu kacda sinta dambe. Meesha sare ee sinta ayaa waxoogaa ka sareysa garbaha markaa waxaa jira qallooc jilicsan, oo sameysanaya qaanso, ilaa dabada. Loin (dhabarka feeraha ilaa miskaha) waa muruqyo, dherer dhexdhexaad ah oo xoogaa qaloocsan. Laabta ayaa ballaadhan oo qoto dheer leh muruq muruq. Feeradaha si fiican ayaa loo fuulay oo loo wareejiyay, iyagoo si buuxda ugu toosan garbaha gadaashiisa. Garbaha lugta hore waa la muruqsan yahay. Miskaha iyo bowdyaha waa xoog iyo muruqyo. Lugaha lugaha si fiican ayey u muruqsan yihiin oo wax yar ka dheer yihiin ciribta hore. Mawqif dabiici ah way toosan yihiin, isbarbar yaalliin oo gooni ayaa loo kala saaraa marka gadaal laga eego. Masaafada u dhexeysa lugaha dambe waa wax ka yar masaafada u dhexeysa lugaha hore. Xanaaqa ayaa dhexdhexaad ah. Stifles waxay leeyihiin leexasho jilicsan oo jilicsan marka laga eego dhinaca. Xaglaha Stifle qiyaas ahaan wuxuu u dhigmaa xagasha miskaha. Hocks-ku waa u siman yihiin dhulka marka laga eego dhinaca iyo gadaasha. Way is barbar socdaan marka gadaal laga eego. Khad laga soo qaaday qaybta dambe ee badhida, oo ku toosan dhulka, waa inuu ku dhacaa suulasha afkeeda hore. Xarriiq laga soo qaaday dhinaca kore (hore) ee miskaha, oo ku tiirsan dhulka, waa inuu dhex maraa jilibka (labada tijaabo ee hore ee xannibaadda wanaagsan waa in lagu sameeyaa iyadoo eyga hogaggiisa loo dhigay meel u dhow dhulka). Cagaha waa cabbir dhexdhexaad ah oo si fiican u qafilan oo wareegsan (cagaha bisadaha). Way toosan yihiin marka xagga hore laga eego. Cagaha gadaal waa ka yar yihiin cagaha hore. Dabada waa in hoos loo dhigaa oo la taabtaa salka ilaa dhamaadka. Waxay noqon kartaa mashiinka bamka ama toosan, oo leh mashiinka mashiinka la doorbido. Dabada waa inay gaashaan hiwaayadda ama inyar ka gaabiyo. Dabada ayaa hoos loo dhigaa, jiif ama sare. Koodhku waa gaaban yahay, dhow yahayna cufnaan dhexdhexaad ah. Waa inay dhalaalaysaa, oo muujinaysa caafimaad wanaagsan. Midabku wuxuu noqon karaa bir guduud, cawl, cows ama madow mid adag ama sita (leh caddaan). Midab adag, cows, casaan ama madow midab adag ama sagxad leh.
Leavitt Bulldogs waa mid dabacsan, laakiin karti leh oo ilaalin kara, aan cabsi lahayn oo isboortis ah, muuqaal-fiirin ah, go'an oo geesinimo leh, geesinimo iyo saaxiibtinimo ku leh qoyskooda iyo asxaabtooda, laakiin cadaawad aan cabsi lahayn oo ku wajahan qof kasta oo u hanjabaya sayidyadooda ama hantidooda. Noocani wuxuu jecel yahay inuu wax calaliyo waana in la siiyaa qalab badan oo la ciyaaro iyo lafo. Qalabka Nylabones iyo caag Kong Kong ayaa si weyn loogu taliyay. Rawhides, caag jilicsan iyo alaabada carruurtu ku ciyaarto waa kuwo aan ammaan ahayn, waayo si fudud ayey u kala jajaban yihiin ama loo liqayaa dhammaantood. Leavitt Bulldogs aad ayey u xiiseeyaan inay ka farxiyaan oo laga yaabo inay si xad dhaaf ah isugu muujiyaan dadaal ay ku doonayaan inay ku qabtaan wax kasta oo iyaga laga codsado. Milkiile u muujiya awood dabiici ah eeyga, is dhexgalka bulshada iyo tababarka adeeca waa muhiim. Waxaa ugu fiican in kanaalka tamarta sare shaqsiyaadka nooc shaqo iyo jimicsi ah. Ujeedada tababarka eeygan ayaa ah gaaro heerka hogaamiyaha xirmada . Waa dareen dabiici ah eey ey leedahay ku dalbo baakadeeda . Markii aan dadku waxay la nool yihiin eeyaha , Waxaan noqonay xirmadooda. Xirmada oo dhan waxay lashaqeysaa hal hogaamiye. Khadadka si cad ayaa loo qeexay xeerarna waa la dejiyay. Sababtoo ah eeygu wuxuu u gudbiyaa xanaaqiisa ciil iyo aakhirka qaniinyada, aadanaha kale oo dhan WAA INAY ka sarreeyaan nidaamka eyga. Bini'aadamku waa inuu noqdaa kuwa go'aaminaya, eeyaha maahan. Taasi waa sida kaliya ee xiriirka aad la leedahay eygaagu u noqon karto guul dhammaystiran. Noocani wuxuu u eg yahay inuu hoos udhaco oo caayo.
Dhererka: Ragga 17 - 20 inji (43 - 51 cm) Dumarka 16 - 19 inji (40 - 48 kg)
Miisaanka: Ragga 60 - 80 rodol (27 - 36 kg) Dumarka 50 - 70 rodol (22 - 31 kg)
eyda ey is raacaan
Waxay u nugul tahay buunbuunin - xaalad xanuun badan oo inta badan loo dhinto oo ay keeni karaan tiro aad u tiro badan oo cunto ah oo hal mar la wada cuno. Sida dhammaan noocyada waaweyn, dysplasia sinta mararka qaarkood way dhacdaa. Bixiyeyaasha ayaa si adag u shaqeynaya si ay uga ilaaliyaan Leavitt Bulldog sidaa darteed, eey aan sinta miskaha xun lahayn lama soo saarin.
Leavitt Bulldogs wuxuu la qabsan doonaa ku dhowaad qaab nololeed kasta. Waa in laga ilaaliyaa qabowga daran iyo kuleylka, inkasta oo aysan u nugulayn sida AKC Bulldog.
Noocan ayaa loo baahan yahay in lagu qaato a socod baako maalinle ah si loo qanciyo dareenkeeda tahriib. Markii si fiican loo hagaajiyo waxay noqon karaan eeyo firfircoon, hase yeeshe, waxay si isku mid ah ugu faraxsan yihiin jimicsi dhexdhexaad ah. Waxay ku sii joogi karaan qaab ahaan qaab wanaagsan oo leh murqo wanaagsan oo leh jimicsi fudud. Eeyadan ayaa si dabiici ah u gaabiya, iyo qaab dhismeedkooda gaarka ah darteed, waa in aan lagu dhiirrigelin inay ku boodaan ama ku lug yeeshaan jimicsi culus sidii arday yar yar.
isku darka basset dune weyn
Qiyaastii 11 sano ama ka badan
Qiyaastii 3 ilaa 12 eey
In yar ayaa loo baahan yahay. Noocani waa celcelis daadiya.
Asal ahaan loo yaqaan Olde Ingiriis Bulldogge , Leavitt Bulldog waa nooc naadir ah oo uu soo saaray David Leavitt isaga oo iskutallaabta kala badh Ingiriisiga Bulldog ah, iyo qeybta kale: Bullmastiff, Pit Bull iyo American Bulldog. Sannadkii 1971-kii wuxuu ku hungoobay Ingiriiska Bulldogs sababo la xiriira taranka iyo dhibaatooyinka neefsashada. Wuxuu ogaaday inaysan u ekaan sidii awowayaashood oo caafimaad iyo xag-jir aan badnayn. Hadafka David wuxuu ahaa inuu soo saaro eey u eg muuqaalkii bulldog ee qarnigii 18aad, oo leh dabeecada maanta Ingiriisiga Bulldogs, hadana caafimaad qaba, dhib la'aan neefsashada, ama dhamaan waxyaabaha kale ee maanta Bulldogs-ka Ingriiska u nugul. Noocan cusub hadda wuu neefsan karaa. Weligood ma noqon doonaan sida ugaadh, awood u leh inay ku ordaan maylal inta lagu jiro cimilada ugu kulul xagaaga, laakiin waxay ka saddex jeer ka fiican yihiin Bulldog casriyeysan oo xaddidan. Dhalashada qeybta qalliinka looma baahna. Taranka artifishalka ah, sababo laxariira ragga iyo darawalnimo la'aan, waxaa lagu badalay xiriir dabiici ah. Cimriga wuxuu ka badan yahay kow iyo toban sano. Dhammaan keydka taranka waxaa lagu sameeyay raajo misigta ah. Ma jiro eey miskaha xun xun oo la soo saaray. David wuxuu sheegay inuu hada xaqiijinayo hadafkiisa ah inuu soo saaro Bulldog leh caafimaad iyo dabeecad awood u leh inuu dadka ugu adeego, halkii uu dadka ku qasbi lahaa inay isaga u adeegaan. David Leavitt wuxuu ku sii badinayaa iyaga ey badan oo layn ah, halka OEBKC eyda u tarmayaan sida eeyga u janjeedha qoyska. Khadadka qaar ee Olde English Bulldogge (OEB) waxay u bixiyeen eeyahoodii 2005 tii waxayna u bixiyeen Leavitt Bulldog si eydooda uga soocdaan qaar ka mid ah khadadka kale ee OEB ee aan la kulmin heerarkooda. Aasaasihii David Leavitt ayaa yidhi 'Sababta ugu weyn ee aan u doonayo in aan u beddelo magaca Taranka ayaa ah in ay jiraan wax badan oo ka duwan oo Bulldog OEB ah oo ka badan kuwa runta ah, eeyahana badankooduna ma laha muuqaalka Bulldog-kii hore ee shaqeynayay. Waxaan qirayaa inay tahay sharafteyda taas oo igu kalliftay inaan doonayo inaan caddeeyo eeyaha culus ee aan ahayn abuurtayda. Kuma qasbi karo inay badalaan jawaabta macquulka ahna waxay ahayd inaan badalo magac aan runti sax aheyn mudada aan isku dayeyno inaan dib u abuurno.
pyrenees weyn eeyo yaryar retriever dahabi ah
shih tzu iyo yorkie waxay isku daraan eeyo yaryar oo iib ah
Hooch eey Leavitt Bulldog at 13 toddobaad jir
Hooch eey Leavitt Bulldog ah asbuucyo 13 jir ah oo ku ciyaaraya kubbadda cagta
Hooch eey Leavitt Bulldog ah oo 13 toddobaad jir ah oo la ciyaaraya Mojo 4-jirka Leavitt Bulldog
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Leavitt Bulldog
Leavitt Bulldog Sawirada 1
shiba inu lagu qasay chihuahua
isku darka shaybaarka eyga Mareykanka
airedale terrier isku-darka soo-celinta dahabiga ah
turjumaadda xun iyo caddaan
Cocker spaniel info sirdoonka eey